Aye Wut Yi Thaung tells her relationship in interview
မအေးသောင်း ရဲ့ အချစ်ရေး အကြောင်းသိကောင်းစရာ
အချစ်ရေးကတော့ ပုံမှန်ပါပဲ။ ချစ်သူကတော့ လူတိုင်းမှာရှိတာ ပဲပေါ့နော်။ ဒီအရွယ်မှအမြီးမပေါက်ရင် ဘာမျောက်လဲလို့မေးရမှာပေါ့ နော်။ အေးဝတ်ရည်သောင်းလည်း လူငယ်ထဲက အရွယ်ရောက်နေတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်သူကတော့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိမ် ထောင်ပြုဖို့တော့ အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူး။ ( Yangon Media Group )
အစ်မ ကတော့ ချစ်သူဆီကမှမဟုတ်ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေ အပါအ၀င် အားလုံးဆီက အချစ်တွေကို
မျှော်လင့်တယ် ။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ အစ်မ က လောဘကြီးတယ်လေ။ ချစ်သူက အနုပညာ နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့သူပါပဲ ။ အချစ်ရေး ကတော့ တော်တော်လေး ကို စိတ်ချမ်းသာဖို့ ကောင်းပါတယ် ။ အဲ့ဒါကြောင့် အစ်မ အနေနဲ့ စိတ်ကျေနပ်ပါတယ်။ ( The Voice)
Hello fans. Don't be sad. Ma Aye Thaung revealed in her interview that she got her soul mate and very happy with her relationship at the moment. She gives an interview to The Voice Journal and Yangon Media Group.
Aye Wut Yi Thaung Celebrity Fashion